अमेरिका–उत्तर कोरिया सम्बन्धमा नयाँ अध्याय - Naya Patrika
अमेरिका–उत्तर कोरिया सम्बन्धमा नयाँ अध्याय
सिंगापुर, ३० जेठ | जेठ ३०, २०७५
कोरियाली प्रायद्वीपलाई निशस्त्र बनाउन ट्रम्प र किमबीच सहमति
किमसँगको वार्ता अनुमान गरेभन्दा सफल भयो । अब किमसँग विशेष सामीप्यता विकसित भएको छ: ट्रम्प
अतीत बिर्सेर ऐतिहासिक दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेका छौँ, अब विश्वले ठूलो परिवर्तन देख्नेछ : किम
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । अमेरिकी बहालवाला राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली नेताबीच इतिहासमै पहिलोपटक शिखर वार्ता भएको हो । एक वर्षदेखिको चुलिँदो विवाद र धम्कीबीच पछिल्लो समय सुध्रिएको सम्बन्ध शिखर वार्तासम्म पुगेको हो । दुई नेताबीच सिंगापुरको सेन्टोसा टापुको क्यापेला होटेलमा स्थानीय समयअनुसार बिहान ९ बजे भेट भएको हो । ट्रम्प र किमबीच एक्लाएक्लै ४५ मिनेट वार्ता भयो ।
किमलाई ह्वाइटहाउस भ्रमणको निम्तो
ट्रम्पले किमलाई ह्वाइटहाउस भ्रमणको निम्तोसमेत दिएका छन् । तर, भ्रमण केही समयपछि हुने उनले बताए । ट्रम्पले प्योङयाङको भ्रमण गर्ने पनि बताएका छन् । उचित समय मिलाएर आफूले प्योङयाङ भ्रमण गर्ने उनको भनाइ थियो ।
वार्तापछि के भने ट्रम्प र किमले ?
वार्तापछि ट्रम्प र किमले भेटवार्ताबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । पत्रकारहरूमाझ उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका हुन् । भेटवार्ता र सम्झौताबारे जानकारी दिन उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेका थिए ।
किमसँगको वार्ता सोचेभन्दा सफल : ट्रम्प
किमसँगको ‘वान टु वान’ भेट परिणाममुखी भयो । वार्ता अमेरिका र उत्तर कोरिया दुवैका लागि उपलब्धिमूलक रह्यो । हामीबीच निकै राम्रो सम्बन्ध छ । किमसँगको वार्ता अनुमान गरेभन्दा सफल भयो । अब किमसँग विशेष सामीप्यता विकसित भएको छ । किमले गरेका प्रतिबद्धतालाई मैले विश्वास गरेको छु ।
विश्वले चाँडै ठूलो परिवर्तन देख्नेछ : किम
सिंगापुर आउन त्यति सहज थिएन, विभिन्न वाधा अवरोध थिए । तर, त्यसलाई पन्छ्याएर हामी यहाँ आयौँ । हामीले अतीत बिर्सेर ऐतिहासिक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका छौँ । अब विश्वले ठूलो परिवर्तन देख्नेछ । आगामी दिनमा अमेरिका र कोरियाली प्रायद्वीपबीचको सम्बन्ध नितान्त भिन्न हुनेछ ।
ट्रम्प–किम सहमतिपत्रमा के छ ?
१. अमेरिका र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया (डिपिआरके) शान्ति र स्थिरताका लागि दुई देशका जनताको चाहनाबमोजिम नयाँ सम्बन्ध स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छन् ।
२. कोरियाली प्रायद्वीपमा दिगो र स्थायी शान्तिका लागि अमेरिका र उत्तर कोरियाले आ–आफ्नोतर्फबाट संयुक्त प्रयास गर्नेछन् ।
३. अप्रिल २७ मा उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच भएको पानमुनजोम घोषणापत्रलाई अनुमोदन गर्दै कोरियाली प्रायद्वीपमा पूर्ण निःशस्त्रीकरणका लागि कोरिया पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।
४. अमेरिका र कोरियाले कोरियाली लडाइँका क्रममा युद्धबन्दी, बेपत्ता भएकाको खोजी गर्ने र पहिचान भइसकेकालाई सम्बन्धित देशमा तत्काल पठाउने ।